Isiqondiso somuthi "Alprazolam" sokusetshenziswa sibhekisela ekuthumeni. Imithi itholakala ngendlela yamathebulethi, ibe nomhlophe noma umhlophe nge-hue kancane ephuzi.
Ngenxa yomsebenzi we-anxiolytic nomphumela olinganiselayo wokucindezeleka walesi sidakamizwa, uvuselela imisipha, uqede ukucindezeleka, ukhuthaze ukulala (ukulala ubambe isikhathi eside), kuncishisa ukuvama kokuvuka kwebusuku ebusuku.
Isidakamizwa esithi "Alprazolam", imiyalelo ephawula lokhu, ayinayo umphumela omubi ohlelweni lokuphefumula nesimo senhliziyo.
Le mithi iboniswa ukuthi isetshenziswe ekunakekeleni izinzwa nokucindezeleka (okuhambisana nokuzizwa kokukhathazeka okungaqondakali nokukhathazeka okwedlulele), izimo ezicindezelayo ezibandakanya (kuhlanganise nezifo ze-somatic), ukuleleka nokuphumula kwesifo esibonakalayo ezigulini ezinokudakwa kwezidakamizwa nokuphuza utshwala.
Ukulungiselela imithi "i-Alprazolam" (imiyalelo yokusetshenziswa igcizelela lokhu ngokukhethekile) iyaphikisana uma kwenzeka isifo somzimba, isiguli, ukuphefumula, ukuphefumula, noma i-mysthenia gravis, i-glaucoma, i-poisoning ephuza kakhulu, i-narcotic, i-psychotropic noma i- hypnotic drugs. Ngaphezu kwalokho, imithi ephikisanayo ayinqunyelwe ngesikhathi sokulindela ingane nokudla kwemvelo, futhi uma isiguli singaphansi kweminyaka eyisishiyagalombili ubudala.
Umuthi "Alprazolam". Imiyalo yokusetshenziswa nezincomo zesilinganiso.
Lesi sidakamizwa sithathwa ngomlomo izikhathi ezintathu ngosuku, kungakhathaliseki ukuthi sidla. Inani eliphelele lemithi lithathwa ngesisekelo solwazi mayelana nobukhulu be-syndrome, kanye nobuzwe besiguli ezingxenyeni zayo. Ekuqaleni kokwelashwa, kuthathwa amanani amancane (0.25 - 0.5 milligrams ngosuku). Uma ngabe izidakamizwa zibekezeleleke, kuqala ukwandisa umthamo kufanele wenziwe kuphela kusihlwa, bese kuthi emini.
Inkambo yokwelapha ingahlala ezinsukwini ezimbalwa kuya ezinyangeni ezimbili kuya kwezintathu. Kumele kuqashelwe ukuthi ngokuphathwa kakhudlwana kwesikhashana, ukuxhomeka kwezidakamizwa ezingathí sina kungakhula.
Uma kunesidingo sokumisa ukwelashwa, ivolumu etholakele incishiswe ngesigamu se-milligram njalo ngezinsuku ezintathu. Uma kwenzeka ukuyeka ukuphika kwemithi, kuyakwenzeka ukuhlakulela ukukhathazeka kwemizwa yokwesaba nokukhathazeka, ukushaywa umoya, ukulala, ukuhlanza, ukuxubana, ukuthuthumela.
Ngokwemvelaphi yokuthatha lesi sidakamizwa, kungase kuvele eminye imiphumela emibi - ukulala (ikakhulukazi ezigulini asebekhulile), ukukhathala okusheshayo, isizungu, ukuxilongwa okungafanelekile, ukuncipha kwezimoto nokuphendula kwengqondo. Ngokuvamile kakhulu kukhona ukuqubuka okungazelelwe kokuhlukunyezwa okungalawulwa, ukucabangela, ukucasula, ukukhathazeka.
Isidakamizwa esibuzwayo sibonakala ngokweqile. Uma kwenzeka ukungenwa okungenhloso noma ngokuzithandela kwemali enkulu yemithi (ama-milligram amahlanu angamakhulu ayisithupha), ukulala, ukudideka, ukukhathazeka kwenkulumo, ukwehlisa izinga lokucindezeleka kwegazi kungenzeka.
Isidakamizwa "i-Alprazolam" nesiphuzo asihambisani. Ukuphulwa komthetho lokhu kuyingozi impilo kanye nokuphila kwesiguli.
Uma kwenzeka ukudlula ngokweqile noma ukuthatha iziphuzo ezidakayo, isiguli kufanele sihlanze ngokushesha isisu, sinike amalahle acushiwe noma ezinye izikhangiso, esibhedlela uma kunesidingo, i-flumazenil isetshenziswa.
Ukulungiswa kwemithi "Alprazolam" analogs kunezinto ezilandelayo: ukulungiselela "Alzolam", "Xanax" noma "Neuol".
Umuthi ungathengwa kuphela ekhondweni.
Isidakamizwa 'Ceraxon'. Imiyalo yokusetshenziswa
Isidakamizwa 'Cerebrolysin'. Ubufakazi, ubufakazi
Ukuzivocavoca umzimba ku-TV "Ithimba le-Jump-Skok" lifaka isandla ekuthuthukiseni okusebenzayo kwengane
Isobho nge okusanhlamvu: zokupheka ezithakazelisayo futhi amasu ukupheka